Fumana uQeqesho lwezandla kwicandelo le-IT kunye neziGanga zekhompyuter »IHodges U
iindidi: Nxu lumene, Bachelor, Itekhnoloji yoLwazi lweKhompyutha, Ubunzululwazi bekhompyutha, Okufumaneka, Isikhokelo esikwi-Intanethi, Technology
Inzululwazi yeKhompyuter ngokuchasene neMigangatho yeTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter
Masiqale ngeziSeko… Ngaba ujonge isiDanga seKhompyutha okanye isiDanga seTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter? Impendulo inokukumangalisa.
Uninzi lwabantu lucinga "ngenzululwazi yeekhompyuter" njengelona xesha lokufumana iidigri zekhompyuter. Inyani yile, ezi zimbini azinakwahluka ngakumbi. Idigri kwiSayensi yeKhompyuter ifunda umba "wesayensi" weekhompyuter ngelixa isidanga seKhompyuter yoLwazi lweKhompyuter kunye nesiseko sikulungiselela ukusebenza ngezandla kwi-IT Industry.
Sinikezela ngeedigri zekhompyuter kugxilwe ngokukodwa:
Itekhnoloji yoLwazi lweKhompyutha is isidanga esenziwe ngokwezifiso esilungiselelwe ukubonelela abafundi ngamabanga emfundo okusebenza kwicandelo le-IT ngokubanzi ngelixa livumela abafundi ukuba bakhethe izinto ezikhetha ngokufanelekileyo ulwazi lwabo, izakhono, kunye namava - ngokukodwa ukubafanelekela ukuba baphumelele.
Ukhuseleko kunye nokuNxibelelana le linqanaba elinika abafundi ithuba lokumba nzulu kukhuseleko lwe-cyber kunye nokuhlaselwa kwe-cyber besebenzisa ukulinganisa kunye nezixhobo ezifumaneka kwindawo yokusebenza ukuze bangaqondi nje ukuba kwenzeka njani na ukhuseleko, kodwa nendlela yokubathintela.
Uphuhliso lweZofthiwe yeyabafundi abanomdla kuyo inkqubo kwaye ukufaka iikhowudi. Eli linqanaba elibanzi labafundi abanomdla wokuphuhlisa isoftware ye-SAAS, isoftware enxulumene ne-intanethi (enjengoyilo lwewebhu okanye izixhobo ze-e), isoftware yokudlala, okanye iiapps.
KwiYunivesithi yaseHodges, sigxile kwizandla ezisehlabathini ze-IT ukuze sikungenise kwimarike yomsebenzi kungekudala - ngezakhono ezifanelekileyo kunye neziqinisekiso ezikhethekileyo ezifakwe ngaphakathi. (Jonga apha ngezantsi ngolwazi olupheleleyo kwiinkqubo zethu zesidanga)
Iikholeji ezingabizi: Umdibaniselwano ongenakufikeleleka kwi-Intanethi kwiiDigri zeTekhnoloji yoLwazi
IZiko lesiDanga sokuQala: I-15 yeeDigri ze-Intanethi eziGqwesileyo kwi-Intanethi yoyilo lwe-2020
Iingxelo eziPhambili zeKholeji: Isikhokelo kwiikholeji ezikwi-Intanethi eFlorida
Iikholeji ezigqibeleleyo: Ezona ziDanga ziBalaseleyo kwi-Intanethi kwiNkqubo yeeKhompyuter yeeNkqubo ze2020
Ezona zikolo zixabisekileyo: Eyona Drafiki yeXabiso liBiza ngexabiso eliphantsi kwi-Intanethi
Indawo yekhompyutha: I-20 Best Bachelors Online kwiTekhnoloji yoLwazi ngo-2016-2017
Umzobo weDigital Hub: Isidanga esiphambili se-15 kwi-Intanethi yoyilo loMzobo lwe-2020
Umzobo weDigital Hub: I-15 ephezulu ye-Bachelor ye-Intanethi enokuThengiswa kwi-Intanethi kwi-Web Development kunye ne-Design 2020
Funda.org: Ezona ziDanga ziBalaseleyo kwi-Intanethi kwiNkqubo yeTekhnoloji yoLwazi (IT) yeeNkqubo
Iziphumo ezinkulu zeKholeji: Iidrafti ezingama-20 zeekholeji ezincinci eFlorida
Isilumko: Ezona nkqubo ziPhambili zoYilo zeDigital kwi-Intanethi
IYunivesithi Yaseburhulumenteni: Ezona Zikolo ziDumileyo zeNkqubo yeMizobo yeKhompyuter kunye neNkqubo yesiGanga
Amagosa aphezulu eMasters: Iiprogram ezingama-25 eziphezulu ze-MIS zeeNkqubo ze-Intanethi kwi-2018
Ezona zikolo ziBalaseleyo: I-10 yee-Bachelor ze-Intanethi eziPhambili kwi-Intanethi kwiNkqubo yeeNkqubo zeKhompyutha
Ezona zikolo ziBalaseleyo: Esona sidanga sineeDigri zeSoftware yobuNjineli kwi-Intanethi
Ezona zikolo ziBalaseleyo: Ezona ziDanga ziBalaseleyo kwi-Intanethi kwiiNkqubo zobuNjineli beKhompyuter
Ixabiso lezikolo: Iinkqubo ezili-10 eziphambili ze-Intanethi ze-Intanethi ezifikelelekayo kwi-Intanethi kwi-Graphic Design 2020
Funda.org: IiNkqubo zeDigital zeZidanga eziPhambili kwi-Intanethi
Ukuvula indlela yabasetyhini abakumacandelo obuchwephesha kuyo yonke indawo!
Kwisikolo seTekhnoloji yeFisher, sikholelwa ekubeni ukubandakanywa kwabo bonke abantu, kubandakanya nabasetyhini kunye nabo bavela kubantu abangaphantsi kwe-STEM, kubalulekile ekukhuleni nasekuqhubekeni kwentsimi ye-IT.
Jonga ngale ndlela, imibutho yetekhnoloji yexesha elizayo ifuna izimvo ezintsha kunye nezintsha ezisebenzela wonke umntu. Ngaphandle kwegalelo labasetyhini abajolise kwitekhnoloji kwindima zobunkokeli, uphuhliso lweemveliso esizisebenzisayo mihla le luyasilela ekufezekiseni iimfuno zabasetyhini abazisebenzisayo.
“Into abantu abaninzi abangayiqondiyo kukuba ikhompyuter sisiseko sayo yonke ingqeqesho yeSayensi, iTekhnoloji, ubuNjineli neMathematics,” utshilo uLanham. KwiYunivesithi yaseHodges, iFisher School yeTekhnoloji ibonelela ngeedigri ezinceda abafundi ukuba baphuhlise izakhono ezifunekayo ukwenza ifuthe elihle kumacandelo obuchwephesha kuluntu lwethu lweshishini.
Kubonakalisiwe ukuba amantombazana akaqhubeki nemisebenzi yetekhnoloji kwinqanaba elifanayo nelamadoda kuba engachazwanga kwizixhobo zekhompyuter, isoftware, kunye nokufaka iikhowudi esemncinci ngokwaneleyo ukuba angaqhuba isidanga solwazi lwekhompyuter. Endaweni yokuza kwimeko yekholeji ngolwazi olufanayo njengoogxa babo, abasetyhini baziva ngasemva kwaye bagqibela ngokushiya eyona nto ingangumkhondo obalaseleyo.
Iinkqubo zeTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter
Nxibelelana neNzululwazi kwiTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter
I-AS yethu kwiTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter ibonelela ngesiseko esomeleleyo senqanaba lokungena kwinqanaba le-IT okanye ukufumana indawo ekugxilwe kuyo njengoko uqhubeka ukuya kwinqanaba lesidanga sakho.
Ngamana bangalungiselela abafundi ukuba babenendawo ebanzi yolwazi kuyo yonke indawo yokwazisa ngentsimi yetekhnoloji.
Ngamana bangalungiselela abafundi ukuba bangene kwinqanaba lokuncedisa idesika okanye uhlobo lokuxhasa izikhundla ze-IT nakweyiphi na imboni.
Inkqubo yeJava ndibonelela ngokuqonda okubalulekileyo kweenkqubo, ezinokunceda abafundi njengoko beqhubela phambili kwindawo ekugxilwe kuyo.
Izifundo ze-Hardware I kunye ne-II zibandakanya ukufikelela kumxholo owenziweyo weLabSim ebonisa abafundi uluhlu olubanzi lweemodeli ezinokuthi zisetyenziswe kwiiklasi ezizayo nakwiimeko zehlabathi zokwenyani.
Abafundi bakhetha indawo abanomdla kuyo kwaye bakhethe ukhetho olusekwe kukhetho lwabo lobuchule. Itekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter ngokubanzi, ukuCwangciswa kweNkqubo kunye nokuKhowuda, okanye uKhuseleko lweCybersecurity kunye neNethiwekhi zinokubonelela ngesiseko esifunekayo ukulandela isidanga se-bachelor's choice.
AS ngokulandelelana kweCIT
ImiSebenzi yeNqanaba le-IT
I-Bachelor yeSayensi kwiThekhnoloji yoLwazi lweKhompyutha
I-BS yethu kwiTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter ivumela abafundi ukuba benze iidigri zabo ngokusekwe kwizakhono ezizodwa kunye nothando kwicandelo le-IT.
Iikhosi zePowershell scripting zinokunika abafundi elona thuba lilodwa lokufumana amava okwenene ehlabathi othungelwano lwamava afunekayo ukudala kunye nokuqhuba izikripthi ezinokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo zenethiwekhi ukugqibezela imisebenzi ephindaphindayo nenzima kumbutho wabo nabuphi na ubungakanani.
Zuza izatifikethi zeshishini kunye nedigri ngaxeshanye. Izatifikethi zeshishini ezikhoyo zibandakanya i-MOS, i-CompTIA A +, i-CompTIA Net +, i-CCNA, i-MCP, i-CompTIA Security +, kunye ne-CompTIA Linux +.
Khetha indlela yeTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter ukuba ujonga isidanga esiguquguqukayo esinokulungelelanisa neendlela ezahlukeneyo zetekhnoloji ejolise kulo naluphi na uhlobo lombutho.
Ukhetho luvumela abafundi ukuba badibanise ukhuseleko, uthungelwano, ulawulo lwedatha, okanye izakhono zenkqubo yesoftware ukuyila idigri ehambelana namava okufunda ukuxhasa iinjongo zomfundi ngamnye.
Abafundi banokufunda indlela yokuchitha iingxaki zeshishini ukumisela isisombululo esifanelekileyo se-IT, emva koko benze indlela efanelekileyo yenkqubo yokuphumeza ngokupheleleyo, kubandakanya ukuqeqeshwa kwabasebenzi kunye nokucwangciswa okuqhubekayo kokugcinwa.
BS ngokulandelelana kweCIT
Imisebenzi yeTekhnoloji yoLwazi
Ukhuseleko kunye neNkqubo yeziDanga zenethiwekhi
I-Bachelor yeSayensi kwi-cybersecurity kunye neNethiwekhi
I-BS yethu kuKhuseleko kunye nokuNxibelelana inikezelwa ngendlela yokunxibelelana, yokwenza izinto ngezandla (kusetyenziswa ezona zixhobo zifumanekayo kwindawo yokusebenza) yezisombululo zenethiwekhi, kunye nokufunyanwa kwe-cyber kunye nokuthintela okunokukunika izakhono ezifunekayo ukuqala ngosuku lokuqala.
Abafundi banikwa ithuba lokufunda ukusebenzisa amandla ePowerShell kwindawo yeWindows ukuze bakwazi ukwenza imisebenzi yolawulo lwenethiwekhi kumbutho wonke ngenkqubo yokubhala.
IHodges U ibonelela ngoomatshini ababonakalayo babafundi ukuseta iinkqubo ezahlukeneyo zenethiwekhi ukubhala, ukuvavanya, kunye nokwenza izikripthi zePowerShell, ezinokunceda ekwakheni nasekucokeni izakhono zabo ngaphambi kokungena kubasebenzi.
Funda izisombululo zokunciphisa ukhuseleko lwangoku kunye nemicimbi yokunxibelelana evela kubuchwephesha obunamava afanelekileyo asentsimini. Mamela njengoko unjingalwazi wakho, osebenza kwiarhente yaseburhulumenteni, enika imizekelo engakholelekiyo, yokwenyani yobukho be-cyberattacks kwaye engacacisi nje ukuba luhlaselwe njani na olo hlaselo, kodwa kwanendlela enokuthintelwa ngayo. Olu lwazi luguqulela kuqeqesho lwendlela yokubona nokukhusela umbutho kwi-cyberattack, kunye nendlela yokuququzelela kunye nokugqibezela ulungelelwaniso lombutho emva kohlaselo oluyimpumelelo oluye lwachaswa ngokuchasene nombutho.
Abafundi banokwandisa izakhono zabo zokhuseleko kwizifundo zethu zokuziphatha okuhle. Abafundi bantywiliselwa kwindawo yokuhlangana apho baboniswa khona ukuskena, ukuvavanya, ukuqhekeza kunye nokugcina iinkqubo zabo. Indawo enomdla elabhoratri ifundela umfundi ngamnye ulwazi olunzulu kunye namava asebenzayo kunye neenkqubo zokhuseleko ezikhoyo ngoku.
Amagumbi ethu okufundela e-IT asebenza kwinethiwekhi ezimeleyo evumela abafundi ukuba basebenzise isoftware yokulinganisa kwinethiwekhi, ukufumanisa ukhuseleko kunye nohlalutyo lweziganeko. Eli thuba lokulinganisa linokunceda abafundi ukuba baphuhlise kwaye bomeleze ukhuseleko kwi-cyber kunye nezakhono zonxibelelwano ngokuzivumela ukuba ziqhube iimvavanyo kwaye zilingise iimeko zehlabathi lokwenyani, ixesha lokwenyani lokufunda eligcwalisa iindlela zemveli zokufundisa.
Abafundi baya kuba nethuba lokwenza iintlobo ezahlukeneyo zenethiwekhi kunye neeseva kunye neendawo zokusebenzela, bafunde ukusebenzisa nayiphi na inethiwekhi ngobungakanani ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, kwaye bafunde indlela yokufumana, ukusombulula, kunye nokuthintela iintlobo ezahlukeneyo zosongelo lokhuseleko kwimithombo yonxibelelwano yenethiwekhi.
I-BS kwi-cybersecurity kunye nokulandelelana kwenethiwekhi
ImiSebenzi yoYilo lweNethiwekhi yeKhompyuter
IiNkqubo zeDevelopment Programme (Inkqubo yokufaka iikhowudi kunye neKhompyuter)
I-Bachelor yeSayensi kuPhuhliso lweSoftware
I-BS yethu kuPhuhliso lweSoftware inokukulungiselela ukuba uyile into entle. Nokuba unomdla wokwenza isoftware, uphuhliso olusekwe kwiwebhu, okanye umhlaba wokudlala-sikugubungele.
Inkqubo yeJava ye-II inokubonelela abafundi ngenkqubo yokunxibelelana ngenkqubela phambili. Abafundi banokufumana izakhono ekubhaleni ikhowudi yesoftware eyandisa ixesha lokuphumeza kunye nendawo yokugcina inkqubo yesoftware efuna ukuyenza ngokufanelekileyo nokusebenza.
Sigubungela umda obanzi wemicimbi yezokhuseleko efumaneka ngokubanzi kwiinkqubo zesoftware kwaye banokulungela abafundi ukuba benze ikhowudi efanelekileyo, esebenzayo kakhulu kwaye ikhuselekile.
Fumana ukuqonda ngendlela yokusebenzisa izakhono ozifundayo kwimeko-yokwenene yehlabathi ye-IT evela koonjingalwazi abasebenza kolu shishino.
Kubafundi abalandela umdlalo, sinika uqeqesho kwiNtshayelelo kwiNkqubo yeMidlalo kunye noPhuculo lweSicelo soPhuculo kunye neNkqubo yokuSebenzisa i-Intanethi kunye neeDathabheyisi.
Kubafundi abanomdla kuphuhliso lwesoftware esekwe kwiwebhu, sinika uqeqesho kwiJava Programming, Programming Concepts II, iWebhu yoyilo I, iZicelo zoMbutho zeMithombo yeendaba yezeNtlalontle kunye neTekhnoloji yokuSebenzisana, i-e-Commerce, uPhuhliso lweSicelo seMfono, kunye neNkqubo yokuSebenzisa i-Intanethi kunye neeDathabheyisi.
Abafundi banethuba lokufunda iilwimi zokufaka iikhowudi njengenxalenye yenkqubo yesidanga, kungekho nkampu yokuqalisa ifunekayo. IHodges U ibonelela ngezifundo kwiJava, Python, XML / Java (uphuhliso lweapp), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
Sebenzisa izakhono zokufaka iikhowudi ozifundileyo kwiiprojekthi ezinje ngokudala iapp ye-Android, ukuphuhlisa iinkqubo zesoftware usebenzisa iJava, okanye ukwenza umdlalo osisiseko obandakanya iifayile zesandi, iimephu zethayile, kunye nemvelaphi yokuqengqeleka ukuphucula amava omdlali ngokubanzi.
Funda ngendlela yokulinganisa izakhono zakho zokufaka iikhowudi ngokudibeneyo kunye nokudala amava apheleleyo omsebenzisi.
BS kuPhuhliso lweSoftware
Imisebenzi yoPhuhliso lweSoftware
Yintoni ebeka iiHodges U zahlukane?
Ukuba ujonge ukufunda amadigri ahambelana nekhompyuter, uyafuna ukwazi ukuba kutheni kufanelekile ukuba uye kwiHodges U. Iinkqubo zethu ziyilelwe ngokukodwa ukuba zikulungele ukuhambisa iziphumo kwiiprojekthi ezinxulumene ne-IT.
Izifundo ze-IT ezinxulumene nomzi-mveliso ezenzelwe ukwakha ulwazi olubalulekileyo njengoko abafundi beqhubeka ngeendlela zabo ezikhethiweyo.
Ukufunda ngokusebenzisana kusisiseko sekhosi nganye ye-IT. IHodges U ithatha ukufunda okusebenzayo kwinqanaba elitsha ngokubonelela ngeelebhu zokulinganisa, oomatshini ababonakalayo, kunye neenethiwekhi ezibonakalayo zabafundi ukuvavanya izakhono zabo nolwazi ngaphambi kokuba bacelwe ukuba basebenze kwindawo yokusebenza.
Wonke umfundi waziswa kwiziseko zenkqubo esebenzisa iJava kwaye ufunda ukusebenzisa iikhonsepthi zenkqubo ukugqibezela imisebenzi yophuhliso lwesoftware. Abafundi bafumana ithuba lokubhala iinkqubo ezilula ezibonisa ukudityaniswa kokusebenza kwesoftware ngofakelo lwenethiwekhi kunye neenkqubo zokhuseleko.
Ulawulo lweprojekthi luhlanganiswe kuyo yonke inkqubo yesidanga se-IT ukwenzela ukukhuthaza izakhono eziya kuthi zincede abafundi ukuba baphathe iiprojekthi ezininzi ze-IT ngaxeshanye ezifumaneka kwiindawo zomsebenzi wanamhlanje.
Abafundi banokuthatha iimviwo zeshishini eHodges U ngeqondo elincitshisiweyo lomfundi, nokuba kungokuzimela ngokwakho okanye njengenxalenye yezifundo zabo. Ukugqitywa kwabo, abafundi banokufumana izatifikethi ezithile zobuchule ukongeza kwidiploma yabo.
Isiqinisekiso ngasinye se-BS yoLwazi lweTekhnoloji siphela ngoHlahlelo loHlahlelo kunye neZisombululo zoYilo. Le khosi inika abafundi ithuba lokubonisa ukuqonda kwabo malunga nokutshintsha iimfuno zeshishini kuyo yonke inkqubo yophuhliso lomjikelo wobomi ukuvelisa isicwangciso esigqityiweyo sokuphunyezwa kwenkqubo yolwazi edibeneyo kumbutho, ngaloo ndlela unika ubungqina bokuba umfundi ukulungele ukuthatha Kumsebenzi we-IT kwicandelo labo elichaziweyo.